TSY FANDRIAMPAHALEMANA : Raim-pianakaviana iray voafira famaky tamin’ny lohany
Raim-pianakavina iray naratra nofirain’ny andian-dahalo famaky tamin’ny lohany sy lamosiny ny alakamisy alina nifoha zoma. 1er août 2017
Tao amin’ny fokontany Begogo kaominina ambanivohitra Tsararano, Distrikan’i Maevatanàna no nitrangan’ny fanafihana.
Nandravarava ireo andian-dahalo miisa 30 vao niditra ny tanàna ka noraofin’ izy ireo avokoa ny omby tao an-toerana. Niezaka nanohitra kosa ireo tompon’omby ka raikitra ny fifandonana, tompon’omby iray voafira famaky ka naratra mafy.
Vaky lefa ireo sasany tamin’ny malaso nitondra ireo omby 70 isa ny ambiny nifandona tamin’ireo tompon’omby hafa ka dahalo iray voatifitra fa lasan’ireo namany ihany. Voalaza fa basy roa tamin’ireo tompon’omby dia lasan’ireo dahalo avokoa. Tafaporitsaka ireo dahalo, raikitra kosa ny fanarahan-dia.
Ny zandary avy ao Maevatanana kosa nanamafy ny fanarahan-dia ka hatramin’izao dia mbola tsy nahazoam-baovao izy ireo, raha ny loharanom-baovao. Voalaza kosa fa nisy vehivavy roa naman’ireo dahalo ary tsy olona avy ao an-toerana izy ireo.
Mbola manaraka fitsaboana kosa hatramin’izao ilay raim-pianakaviana tompon’omby, raha ny loharanom-baovao ihany.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1917) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021